China Industrial Gelatin for Yesigcilikisha ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-Gelatin Yezimboni yokunamathisela ikhethwa phakathi kokunamathela okuhlukahlukene ngoba iGelatin inamandla amakhulu, ubumnene nezakhiwo zejel.
Ikhono le-emulsification nokumiswa kwe-gelatin
I-Industrial Gelatin inekhono elinamandla lokumisa futhi likhuthaze ukuhlakazwa nokumiswa phakathi kwezigaba ezahlukahlukene, ezingabuye ziqondwe njengamandla okuvikela ama-colloid.
Amandla okunamathela we-gelatin
I-gelatin yezimboni inamandla amakhulu okunamathela, futhi ingagcina ubuqotho bomkhiqizo, ohlobene ne-hydrophilicity ye-gelatin.
Ukusetshenziswa kwe-gelatin yezimboni
1. Okokuqala ngomthamo wamanzi afanayo noma athe xaxa (isilinganiso seglu namanzi isilinganiso esingu-1 kuye ku-1.2-3.0, kungcono ukusebenzisa amanzi afudumele) ukumanzisa i-glue amahora ambalwa noma ngaphezudlwana, yenza iblue block ithambe , bese ishiswa cishe ngama-degree angama-75, yenze ibe uketshezi lweglue ingasetshenziswa.
2. Isilinganiso seglue namanzi kufanele sinqunywe ngokuya nge-viscosity edingekayo. Amanzi amaningi, i-viscosity ephansi, namanzi amancane, i-viscosity ephakeme. Lapho kushiswa i-gelatin, izinga lokushisa akumele libe phezulu kakhulu, ngoba izinga lokushisa elingaphezu kwama-degree ayi-100 lizonciphisa i-viscosity ngenxa yokwehla kwamangqamuzana, kanti i-gelatin izoguga futhi yehle.
3. Kunezinsalela ezilandelanayo ekusetshenzisweni kweglue, ngakho-ke kuyadingeka ukuxubana namanzi ngenkathi usebenzisa ukulungisa i-viscosity kanye noketshezi. Ukushisa kwebhati kufanele kusetshenziselwe ukushisa i-glue. Akuvunyelwe ngokuphelele ukushisa i-glue ngqo esitsheni.
4. I-gelatin kufanele igcinwe ngaphansi kwezinga elithile lokushisa ngaphambi kokuthi isetshenziswe. Ngakho-ke, lapho amanzi edingeka ekusetshenzisweni, izinga lokushisa lamanzi ne-colloid kufanele ngokufanayo lifane, futhi amanzi abandayo akufanele engezwe. Lapho usebenzisa i-gelatin, ijubane kufanele lisheshe futhi lifane. Lungisa inani lamanzi ne-gelatin ukuthola i-viscosity oyifunayo.
Langaphambilini AmaSpredishithi Wokukhanya Okuphezulu weGelatin weDessert
Olandelayo: I-Gelatin Yezimboni yeJelly Glue